वेस्ट इन्डिज भन्दा इङ्ल्यान्ड बलियो ! यस्तो छ दुबै टिमको हेड टु हेड – Nepal Trending
वेस्ट इन्डिज भन्दा इङ्ल्यान्ड बलियो ! यस्तो छ दुबै टिमको हेड टु हेड
On ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १२:३८
साउथह्याम्पटन : जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज (सुक्रबार) घरेलु टोली इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज खेल्दैछन् । रोज बल मैदानमा साँझ ३ः१३ बजे सुरु हुने यस खेल निकै रोजक हुने अनुमान गरिएको छ । दुवै टोली निकै बलिया मानिन्छन् । सन् १९७५ र १९७९ को विश्वकप उपाधि चुमेको वेस्ट इन्डिज सदाबहार टोली हो ।
यसअघि तीन खेल खेलेको इङ्ल्यान्डले दुई खेलमा जित र एक खेलमा हार व्यहोरेको थियो । यता समान तीन खेल खेलेको वेस्ट इन्डिजले एक खेलमा जित, एक खेलमा बराबरी र एक खेलमा पराजित भएको थियो । विश्वकप विजेता दावेदारको रुपमा रहेका दुवै टोलीलाई आजको खेलमा जित निकाल्दै प्रतियोगितामा बलियो बन्ने अवसर छ ।
यी दुई टोलीबीच एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा हालसम्म एक सय एक खेल भएको छ। तीमध्ये ५१ खेलमा इङ्ल्यान्ड र ४४ खेलमा वेस्ट इन्डिज विजयी भएका छन्। ६ खेल भने अनिर्णित रूपमा सकिएको छ। यी दुई टोली एकदिवसीय क्रिकेटमा सन् १९७३ देखि आपसमा भिड्दै आएका छन्।
पछिल्लो पटक सन् २०१९ को मार्चमा यी दुई टोलीबीच एकदिवसीय खेल भएको थियो। सेन्ट लुसियामा खेलिएको उक्त खेलमा वेस्ट इन्डिज सात विकेटले विजयी भएको थियो। टेस्ट क्रिकेटमा त यी दुई टोलीको भिडन्त झनै पुरानो छ। सन् १९२८ देखि यी दुई टोलीबीच टेस्ट शृंखला हुँदै आएको छ। यस आधारमा इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज लामो समयदेखिका परिचित प्रतिद्वन्द्वी हुन्।
यसअघिका विश्वकपमा यी दुई टोलीबीच ६ पटक भेट भएको छ। पाँच खेलमा इङ्ल्यान्ड र एक खेलमा वेस्ट इन्डिज विजयी भएका छन्। सन् १९७९ को विश्वकपमा वेस्ट इन्डिज ९२ रनले विजयी भएको थियो। इङ्ल्यान्ड सन् १९८७ को विश्वकपको पहिलो खेलमा दुई विकेट र दोस्रो खेलमा ३४ रनले विजयी भएको थियो। यसैगरी इङ्ल्यान्ड सन् १९९२ मा ६ विकेट, सन् २००७ मा एक विकेट र सन् २०११ मा १८ रनले विजयी भएको थियो।
इङल्याण्डको सम्भावित एघार : इओन मोर्गन (कप्तान), लियाम प्लन्केट, आदिल रासिद, जो रुट, मोईन अली, जोनी बयरस्टो, जस बटलर, जोफ्रा आर्चर, जोसन रोय, बेन स्टोक्स र क्रिस वोक्स ।
वेस्टइन्डिजको सम्भावित एघार : जेसन होल्डर (कप्तान), निकोलस पूरन, ओशन थमस, शाई होप, आंद्रे रसेल, एशले नर्स, कार्लोस ब्रैथवेट, क्रिस गेल, केमर रोच, , शेल्डन कटरेल र शिमरन हेटमेयर ।